Waxyaabaha aadka u yareeyey ee iga dhigtay iPhone-kayga ee iPhone - TELES RELAY
ACCUEIL » TECH & TELECOM Waxyaabaha aadka u yareeyey ee iga dhigay inaan ka sii deyno iPhone for Android
Waxyaabaha aadka u yareeyey ee iga dhigay inaan ka sii deyno iPhone for Android
Waxaan ahay qof iPhone ah bilawgii bilawgii. Anigu ma lahayn iPhone asal ah marka la furayo, laakiin waxaan bilaabay isticmaalka taleefannada casriga ah ee iPhone la yiraahdo 3G mana aanan waligin weligay.
Ilaa dhowaan, taasi waa in la sheego.
Dhowr maalmood ka hor waxaan go'aansaday in aan casriyeeyo Android. . Ma sahlana. Tobankii sano ee la soo dhaafay, waxaan ku kiciyay jiilasha cusub ee iPhone. Waxaan lahaa 3GS, 4, 4, 5, 5, iwm. Sannadka kaliya ee aan ku guuldaraystay waa iPhone 7, laakiin waxaan si dhakhso ah ugu boodayey 8 ka dibna X. Sidaa darteed, maxaa igu khasabtay inaan iiga tago markabka?  Ku kalsoonow ama ha yaraatee, waa wax yar.
Doodo badan oo ku saabsan roonaanta ah ee ku saabsan Android on ku tiirsan yihiin waxyaabaha sida shakhsi ahaaneed iyo xorriyadda in ay sameeyaan oo kaliya wax kasta oo aad rabto qalab ah oo aan ka walwalaynin ku xiridda software. Anigu ma ihi arrin aniga.
Waa abaal-marin yar oo wanaagsan si ay u awoodaan in ay abaabulaan barnaamijka Android ee loogu talagalay dhadhankaygu halkii aan daawan lahaa muraayadaha la midka ah ee la qaboojiyay ee aan arko ee aan arko muddo 10 sano ah, laakiin taasi si dhib yar ayaa loo tixgeliyaa sababtayda. Taasi waxay tidhi, "xoriyad" ayaa dhab ahaantii door ka ciyaartay.
Si fiican ugama ciyaaro dadka kale
Wax qarsoodi ah maaha in Apple uu rabo in aad u iibsato dhammaan nidaamka deegaanka iyo si caddaalad ah kuugu ciqaabaya adiga oo aan sidaas samayn. iMessage waa tusaale ka mid ah maamulka Apple oo adeegsanaya adeegyadeeda, tani waa tusaal wanaagsan. Xaqiiqada ah in 2019 marwalba waa inaan waydiiyaa Apple si aan u sii daayo nambarkayga taleefankayga marka aan u wareego meele kale oo mobile-ka ah waa mid cajiib ah, laakiin xitaa taasi ma aha arrin wax ku ool ah go'aankeyga.
Dhibaatada ugu weyn ee Iphone ah waxay la xiriirtaa hoyga guriga.
Waxaad aragtaa, waxaan isticmaalayaa Chromecast on TV kasta oo gurigeyga. Sida user a iPhone, Apple door bidaan in aan maalgashan ciidan ee Apple TV, laakiin taasi ma dhicin. Sidaa darteed, waxaa la igu ciqaabayaa daacadnimadayda Chromecast iyada oo leh muuqaal ammaan ah, waxaana dhawaanahan bilaabay inaan ogaado sida ay xaaladdu u xun tahay.
Waxaa laga yaabaa sanad in tan iyo markii aan ogaaday in aan Chromecast ahaa uu qaatay si aad u hesho si ay u buuxiyaan akhbaarta akhristaha sida codsiyada sida Twitch iyo xitaa gurigayga Plex. Bilaabista filim ka timid serverkeyga Plex ama bilaabidda socodka Twitch, tusaale ahaan, waxay qaadan kartaa ilaa xinjirta 30. Marka hore waxaan u maleynayay inay ahayd Chromecast lafteeda, anigana waan ka daalay. Dabadeed iPhone-ga ayaa jabsaday.
Waa hagaag, isagu iskama jebin; Waan jabiyay iyada oo la taaban karo. Waxaan u direy dayactir iyo bilaabay isticmaalka Galaxy Note 8 sidii taleefan nuqul ah. Waxay ahayd arrin si dhab ah markii aan ogaaday in aysan ahayn Chromecast oo ahayd dhibaatada; Waxay ahayd my iPhone. Laga bilaabo wabiga telefishinkaygu wuxuu qaatay wax ka yar afar ilbiriqsi waxaanan ku dadaali karaa inuu udhexeeyo Plex, YouTube, Twitch iyo xitaa daawashada shaashadda casriga ee igu dhow isla markiiba. Waxay u egtahay saacad qaylo-dhaan ah iyo markii iPhone-ka X Apple uu ka soo laabtay Apple, waxaan sameeyay baaritaano kale.
Wax kasta oo isku dhafan - Waxaan tijaabiyey my iPhone X, xaaskeyga iyo iPhonegii hore ee 8 Plus ka hor istaagay. Chromecast iyo mid ka mid ah 4K-da ugu dambeeyay - dib u dhac ayaa la mid ah. Galaxy Note 8 ayaa had iyo jeer ahayd mid deg deg ah, xittaa dhowr telefoon oo Android ah oo ka yar lacagtii 100 oo aan ku guuleystey in aan wax walba ku dhaqmo.
Rumayso ama ma aha, ma aha dhammaadka. dhibaatooyinka aan la leeyahay xiriirka iPhone / Chromecast. Dhibaatada kale ee weyni waxay la xiriirtaa xakamaynta mugga, taas oo iPhone-yadu ku guuldareystaan.
Marka ugu tuuray sidii Netflix ama Plex loo isticmaalo on TV a, waa jeedo weyn haddii iPhone ogolaan doonaa ii xakameeyo mugga Chromecast la badhamada jirka dhinaca telefoonka.
Iyada oo la isticmaalayo iOS, waxaad helaysaa xajmiga mugga software, waana taas. Awoodda aad u leedahay inaad bedesho miisaanka content-kaaga ee TV-gaaga adoo adeegsanaya taleefanka gacanta ee mugga wuxuu ku xiran yahay barnaamijyada aad horey u furtay iyo go'aankana si aad u go'aansato in aad maareynayso mugga miidhiyada warbaahinta si joogto ah. Ilaahay wuu mamnuucayaa haddii aad rabto inaad xakamayso mugga teleefishinkaaga et fiidiyow ama muusiko ka duwan telefoonkaaga, maxaa yeelay marnaba ma noqon doonto mid sahlan.
Xaaladda ugu xun ee waa wax aan la kulmi arrin inta badan la X. iPhone Waxaan haystaa warbaahinta durdur on TV a via Chromecast iyo wax baahin on my phone, waxaa laga yaabaa video gaaban on Twitter ama wax nooc. Waxaan doonayaa in la kordhiyo mugga on my phone, laakiin riix badhanka mugga beddelo mugga Chromecast.
Weliba wali, telefoonkayaga mugga mugdiga ayaa furan, laakiin markiiba waa soo noqotaa. iyadoon loo eegin mugga asalka ah. Tani waa nooca ugu wareersan ee Whack-a-Mole ee adduunka, sababtoo ah iyada oo aan loo eegin waxa aad samayso, waxay ku noqon doontaa meesha aad bilaabay.
On Android - labadaba on Samsung Note 8 iyo on my phone Android hadda - Xakamaynta Volume waa mid aan sahlaneyn. Marka aan taabto badhanka mugga, waxaan haystaa ikhtiyaari ah inaan arko liis dhamaystiran oo ka mid ah kontaroolada mugga ee madax bannaan. Hal guji, waxaan arki karaa mugga heesaha, qalabka digniinta, faylasha warbaahinta ee telefankayga iyo fiidiyo fiidiyow ah oo ku saabsan Chromecast.
Waxaad ku soo dhowaan kartaa isla isku mid. Waayo-aragnimada iPhone-ga waa mid si gaar ah loo adeegsado barnaamijka Google-ga ee Google, ama in la rajeeyo in warbaahinta lagu ciyaaro taleefankaaga inay leedahay miisaan si xor ah oo ka madax banaan xisaabteeda. Anigu waan ahay ma aha arrin midka kaliya ee uu arko wuxuu leeyahay dhibaato.
Yaa khalad ah?
Si aan si fiican u caddeeyo, ma isku dayi doono inaan faro faro saaro. Miyuu mas'uul ka yahay xaqiiqda ah in telefoonkiisu uusan si fiican u shaqeynin qalabka ugu jaban ee tartanka adag? Maya. Malaha maya. Tan iyo markii ay jiraan arimo la xariira, haddii aan isticmaalo barnaamijka Google iyo haddii kale, waa adag tahay in la rumaysto in dhibaatadu tahay Chromecast, laakiin taasi waxay noqon kartaa kiiska. Xakamaynta xakamaynta maskaxda, dhanka kale, waxay u egtahay inaysan ka shaqeynin qayb ka mid ah IOS, laakiin xitaa taasi waa mid yar oo ku jirta nidaamka weyn ee waxyaabaha.
Maanta, macruufka iwm iyo Android waxay ku dhow yihiin marka la eego howlaha sinaanta ee aad si fudud u imaan kartid oo u kala dhexeyn kartid iyaga oo aan carqaladayn noloshaada digital. Laakiin marka laba goobood oo aad u dhow yihiin, waa waxyaabo yaryar oo saamayn ku leh qof ahaan ama hab kale. Xaaladdan oo kale, wax fudud sida sahlan ee guriga iyo xakamaynta mugga aasaasiga ah ayaa ku guulaystay in ay isbedelaan kadib muddo ka badan toban sano oo daacadnimo ah oo ku saabsan IOS.
Maqaalkani wuxuu u muuqday midka hore https://bgr.com/2019/04/09/switching-to-android-reasons-chromecast-streaming/
Chad - Fikradda Fikradaha: Maamulka ayaa lagu wareejiyay shirkadda Sudanese-Chadian ee Sudatchad
Shaqaalihii hore ee Valve waxay u maleynayaan in Dukaanka Epic uu yahay war wanaagsan oo ku saabsan warshadaha ciyaaraha